Chiedza chaJah auto maruva echikadzi | MyWeedSeeds.com
Auto maruva Vakadzi
Chiedza chaJah auto maruva echikadzi
Chiedza chaJah mbanje mbanje dzinodzika kubva kune yakanyanya kupembererwa Jack Herer sativa Haze dzakasiyana uye ine simba rakanyanya. Hunhu hwaJack Herer hunotonga, zvichiita kuti Chiedza chaJah chive chimwe chemhando dzakanakisa mumbeu yembeu emporium. Chiedza chaJah chinowanzodanwa kunzi ivo vanofarira mbanje kushungurudzika neanovice uye varimi vane mwaka, zvakafanana. Nekuda kweake otomatiki maruva chimiro, uyu mbanje chirimwa chine hurefu hushoma uchienzaniswa neyakajairwa & yechikadzi Chiedza chaJah zvakasiyana. Iyo auto inotumbuka chirimwa inotanga ichikura mushure memasvondo matatu. Zvisinei nemamiriro ezvinhu akareruka. Saka zita "auto maruva". Anokura gobvu repakati cola (repakati bud) iro rinogadzira masumbu mazhinji emabhureki akaremerwa kwazvo neTHC makristasi uye inonamira resin zvekuti kunyange mashizha ake nematavi anoputirwa. Rutivi rwake rwesativa rwunoguma neyakareba nguva yakati rebei kupfuura michero mizhinji, asi goho rake (zvirinani kana rakura mumba) rakakodzera kumirira. Chiedza chaJah mbanje inodyisa mweya nekuvhengana kwepunzwa mhiripiri Haze hwema uye tambo yakatetepa yefruity skunk. Yake yekuhwina mubairo-inoratidzira hwema hwake - yakasimba mhiripiri Haze yakasanganiswa nemuchero wemucitrus. Chiedza chaJah chinogadzira chakasimba kune vanoputa, hunosimudzira hutachiona hwepamusoro uye giggly mood.